Global Voices teny Malagasy » Ny Zavakanto Rosiana Momba Ny Fijokoana “Faran’izay Zokiny” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Janoary 2019 7:19 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet, GV Mpisolovava
Tamin'ny fampiasàna ireo sary ireo, mitodika any amin'ilay tolotra an-tambajotra antsoina hoe FindFace  i Tsvetkov, izay ahafahanao mandefa kianjoanjo sary mifandraika amin'ny endrik'olona iray. Amin'ny alalan'ny teknolojia famantarana endrika , ny FindFace avy eo no manao ny fikarohana ao anatina angon-tsary an'ny Vkontakte, ilay tambajotra sosialy malaza be ao Rosia. Raha mahita iray mitovy amin'izany izy, ataony izay azony atao mba hamantarana ilay olona asehon'ilay sary. Afaka hita amin'izay fomba izay avokoa ny sary rehetra nalefa sy nasiana famantarana ao amin'ny Vkontakte, raha toa ny mpampiasa aterineto nifidy ny hahafahan'ny daholobe mahita ny zavatra avoakany. (Manao an'izay avokoa ny ankamaroan'ireo mpampiasa).
Nolazain’ i Tsvetkov teo amin'ny vohikala Bird in Flight fa tiany hotsapaina hoe ahoana ny fomba nandravàn'ny aterineto ny ampihimamban'ny Fanjakana amin'ny famantarana ny maha-izy ny tsirairay amin'ny alalan'ireo sary sy lahatsary. Na izany aza tsy hoe mahatalanjona fotsiny ny tetikasa ara-javakanto ataony. Manazava i Tsvetkov fa asehon'ny asany hoe matetika ny “narsisisma nomerika” dia “miteraka” fijokoana an-tserasera. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny famoahanao ny sarin'ny tenanao ety anaty tambajotra dia manome vahana an'ireo olon-tsy fantatra hamantatra ao anaty aterineto ny toerana misy anao, ka hahafahan'izy ireo mahalala ireo torohay tsy nozarainao akory tamina vahiny sendra nifanena taminao tao anaty fiarandalamby.
“Very ankehitriny ny fahalalahan'ny olona hanao zavatra ankalamanjana ary ny fahazoana antoka fa tsy hisy olona te-hahalàla izany”, hoy ny nambaran ‘i Tsvetkov teo amin'ny vohikala Apparat.cc, ary nampiany hoe “somary mampitahotra izany. Ankoatra ireo fototra fakàna sary an'ireo tambajotra sosialy, marobe ireo toerana hafa: banky, trano fanaovana fanatanjahantena [sy sisa sy ny sisa]. “Ankehitriny, ao anatin'ny segondra vitsy monja, ny fikarohana iray tsy mitonona anarana sy haingana atao amin'ny pejy media sosialin'ny olona iray dia afaka mamadika zavatra iray tsy azy akory ho lasa namana akaiky azy”, hoy ny fampitandreman'ila y mpakasary.
Saingy mety hanamafy ny tena olana nezahan'i Tsvetkov hasongadina ve ilay tetikasa ? Ny Talen'ny Global Voices Advox Ellery Roberts Biddle , izay manana traikefa manokana amin'ireo olana momba ny sotasota an-tambajotra sy ny fiarovana ny fiainana manokana nomerika, dia nanana an'ity izy ho ambara momba ny tena fiantraikan'ilay tetikasa amin'ny fiainana tena izy:
Afaka hanamafy izy hoe ireo sary nalaina tao anaty métro ireo, tsy nisy nanampiana na nanalàna, dia tsy maneho zavatra betsaka noho izay efa nalefan'ireo olona ireo ihany teo amin'ny VK, saingy tsy mitovy ny fifidiananao hametaka ny sarinao eo amina vovonana iray an'ny media sosialy ho azon'ny daholobe jerena sy ny fifidianana ny hametaka izany na aiza na aiza ao anaty aterineto. Manan-danja be ny manodidina ny tranga iray  – mety tena tsy misy tsiny ny sarina vehivavy iray mitafy akanjo tsara tarehy, ao anatin'ny tambajotra sosialy iray, saingy raha vao apetaka ao anatina andiana sary amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny mpijoko tahaka izao, mpisotasota iray, dia manomboka milaza zavatra hafa ilay sary.
Mba hahitàna bebe kokoa, jereo ny tafatafa  an'i Tsvetkov ao amin'ny Birdinflight.com.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/23/133274/
 teknolojia famantarana endrika: https://en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system
 hoy ny nambaran: http://apparat.cc/human/your-face-is-big-data/
 Manan-danja be ny manodidina ny tranga iray: https://advox.globalvoices.org/2013/04/06/facebooks-graph-search-be-careful-what-you-like/